Complete Guide To Ichibi EFrance ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba eFrance > Complete Guide To Ichibi EFrance ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 11 amaminithi
Sekuyisikhathi eside France kube ozithandayo futhi omunye izivakashi ethandwa kakhulu izindawo eYurophu. Nanjengoba yilona zwe elikhulu kunawo entshonalanga Yurophu, kunengqondo travel ngesitimela. Uhulumeni waseFrance imali enkulu ngesivinini imigqa (igolide elikhulu ngesivinini umugqa TGV) futhi ngesivinini izitimela (isitimela Omkhulu TGV igolide Speed ​​zemininingwane). Kunezinhlobo ezingaphezu kuka- 1056 amamayela (1700 km) ka ozinikele ngesivinini imigqa kanye izinkulungwane zamakhilomitha zinqamula imigca kanye ezincane. Cishe lonke lelo zwe iyatholakala nge nojantshi French. izitimela eFrance ephumelelayo, okusheshayo, futhi uzothola lapho ufuna ukuya ngaphakathi ezweni kanye noma kusuka kunoma yiliphi izwe elingumakhelwane. Uma umhambi besikhathi sokuqala eFrance, indlela engcono kakhulu ukuthola azungeze usebenzisa isitimela nohambo ngokusebenzisa ngokucophelela uhambo ukuhlela. Nokho, inethiwekhi wesitimela kungaba kancane wayephambanisa, ikakhulukazi uma ungakhulumi noma ukufunda French. Ukukusiza uqonde uhlelo isitimela e-France, sidale Umhlahlandlela ephelele travel lonke France ngesitimela.
Kulesi umhlahlandlela, uzothola konke odinga ukukwazi ukudala uhlelo lwakho siqu travel. Sizophinde kuhlinzeke imininingwane ngokufinyelela kwi izinkampani isitimela ezahlukene ukuthi usebenze eFrance izinhlobo izitimela. Sizokunikeza amathiphu eziwusizo ukuthenga amathikithi ngentengo ephansi, lokuzulazula uhlelo ujantshi, izinzuzo wesitimela maqembu, nokuthola emhlabeni yeFrance kusukela Paris. Qhubeka ufunde Complete Guide To Ichibi EFrance ngu zemininingwane ukuthola indlela travel eFrance ngesitimela.
Indlela Thenga zemininingwane Amathikithi EFrance
Ngingalutholaphi yokuthenga amathikithi esitimela njengoba ngizovakashela France?
Kukhona izindlela eziningana lula futhi elula noma amawebhusayithi ukuthenga amathikithi isitimela French. Ziyakwazi sasivumela lula ukusetshenziswa, kodwa abaningi babo ihambisane nezimfanelo ezingavamile zomunye yabo futhi babhekwa ukuthi sidinga ukuba aveze.
Gcina i-zemininingwane yinkampani computer futhi yashintsha wesitimela ithikithi. Vakashela i-website yabo, qhathanisa ezitimeleni zamanani ehlisiwe, ukukhetha umugqa isitimela, bese uthayipha esihlalweni ufuna. Ungakwazi ukhokhe nge-credit card yakho noma ngisho bitcoin. Uma kwenzeka intengo ithikithi lakho isitimela sika lehla, yesikhulumi izokwazisa futhi ingakusiza bashintshisane ngemali ephansi.
When ukufinyelela iwebhusayithi esemthethweni ye Railways French, ngeke cishe get kabusha ku RailEurope.com, okuyinto esemthethweni North American umlingani zaseFrench Railways. Nokho, ngeke njalo uthole liqhuba eshibhe ku Rail Europe. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi kufanele unake ukuthi imali eshibhile yomzila wesitimela ikwi-Gcina A Sitimela.
At The Isiteshi Sesitimela
isuka efasiteleni okuthengwa kulo ithikithi, ngesikhathi umshini Vending - Kunezindlela ezimbili yokuthenga amathikithi esitimela French esiteshini kukhona. English-Izikhulumi ungakwazi ukuthenga kubo noma indlela, kodwa uma English yakho ingabe akukhona nje futhi abakwazi ukuxhumana nomuntu efasiteleni ithikithi kahle, umshini Vending kuyinto ukubheja wakho omkhulu. Kulula hlwaya, futhi ungakwazi ukushintsha ngisho izilungiselelo zalo ulimi. Ukuthenga amathikithi kusukela umshini Vending kudinga Chip & I-PIN ye-credit card.
kufanele ngiqoqela kanjani ithikithi lami ku-intanethi?
Kukhona izindlela eziningana lokuqoqa amathikithi akho:
Sithathe esiteshini. Ukuqoqa amathikithi yakho esiteshini, ungasebenzisa inombolo Imininingwane yokubhuka noma ikhadi lesikweletu (umuntu oyisebenzise ukuthenga amathikithi).
Phrinta-at-ekhaya amathikithi. Emva kokuba uthole amathikithi electronic, ungaphrinta futhi ngizibonise siyinikeze umqhubi isitimela kodwa ongazi ihlola amathikithi.
amathikithi Electronic. Uma ungafuni ukuphrinta amathikithi akho, ungalanda ukuba ifoni noma ithebulethi yakho. Ungakwazi nje ukukhombisa umqhubi ithikithi lakho nge kwakho isikrini ifoni noma ithebhulethi.
amathikithi imeyili. Amanye amasevisi unikele inketho ukukuthumela amathikithi ngemeyili njalo. Nokho, okungukuthi enensayo kakhulu, ngakho-ke, hhayi kukho letiphakanyisiwe.
Kufanele I ukuthenga amathikithi esitimela kusengaphambili?
Singasho wayephambanisa ukwazi lapho isitimela amathikithi angathengwa noma nini futhi lapho kufanele uthenge kusengaphambili ngoba kukhona izinhlobo eziningana izitimela kanye nezinsizakalo ezihlukene isitimela.
Regional / izitimela wendawo. izitimela Regional futhi lendawo ukuxhuma izindawo nezasemalokishini lesifunda. Rer futhi Transilien Connect suburban Paris, ngenkathi TER izitimela (Izincwajana zemininingwane Regional amazwi) kukhona izitimela lesifunda ukuthi ukuxhuma Izikhumulo lesifunda nge emadolobheni amancane. Awunayo yokuthenga amathikithi esitimela lesifunda kanye lendawo kusengaphambili, nje ukuthenga kubo kwesokudla ngaphambi kokuhamba.
izitimela Intercite (IC). Kuvele Intercites isitimela kuyinto isitimela express ongenalo travel emigceni ngesivinini futhi ixhumanisa amadolobha kanye amabanga emifushane. Ungathenga amathikithi e-IC ngaphambi kwesikhathi ukuze uthole isaphulelo.
izitimela ngesivinini (TGV). TGV izitimela kukhona izitimela esheshayo eFrance, namathikithi ngabo ayatholakala ekuthengeni 90 izinsuku kusengaphambili. Amanani ngabo ilokhu yenyuka njengoba usuku Ukuhamba osondela, ngakho bhalisa kubo ekuseni ngentengo ephansi. Ithikithi uthenge 90 izinsuku kusengaphambili lalingabiza € 30. Kodwa uma ungachaza ukuthenga kubo izinsuku ezimbalwa ngaphambi sokuhamba, intengo yamathikithi ingafika ku- € 100.
izitimela International. Imithetho efanayo yokubhuka ekuqaleni zisebenze izitimela ngamazwe ngoba lawa futhi ngesivinini izitimela.
Yiziphi izinzuzo amathikithi wesitimela pass?
Kukhona anhlobonhlobo amathikithi wesitimela pass ongazisebenzisa ukuze travel lonke France ngesitimela. Ezinye zazo zikuvumela ukuba travel ngaphakathi eFrance nakwamanye amazwe aseYurophu, bese kuba khona wesitimela maqembu ukuthi unecala ukuhamba ngaphakathi France. Ngokungafani athenge amathikithi esitimela ngemali njalo, amathikithi wesitimela pass ihambisane ezinye izinzuzo:
Ukuvumelana nezimo. Nge ithikithi wesitimela pass, uthola angenamkhawulo isitimela sokuvakasha. Vele uye esiteshini noma kunini uma uthanda, ukuqothula pass wesitimela ehhovisi sesitimela bese esitimeleni elandelayo etholakalayo.
izaphulelo. Rail sihamba ngokuvamile ihambisane inclusions izaphulelo ezikhangayo, abenze inketho esihle kakhulu isabelomali abahambi. Kungaba elikhulu imali-isilondolozi, okuyinto isizathu esiyinhloko esenza abantu ukuthenga wesitimela ayishiyile. amathikithi ngomzuzu wokugcina isitimela kuyabiza uma ungenawo ukubhuka izitshele kusenesikhathi.
Lula. Awudingi ukuba sikhathazeke kokuthenga ithikithi njalo ufuna ukuthatha isitimela, kodwa kufanele ube nokuvumelana nezimo njengoba ungeke ube nendawo kuzo zonke izitimela ozifisayo.
ithikithi Yikuphi wesitimela pass ngizilelani ukuthenga?
Lapho uthenga ithikithi wesitimela pass, ungakhetha phakathi France Country Pass futhi Multi-Country Pass (Eurail Global Pass).
I France Country Pass kuyinto ukubheja wakho omkhulu uma ojikelezayo nje eFrance ngoba inikeza travel angenamkhawulo kwi wesitimela inethiwekhi kazwelonke (kuhlanganise phakathi kwamadolobha, TER, TGC, njll). Ungakhetha noma 1 ukuze 8 izinsuku zokuhamba kungakapheli nenyanga kanye akhethe phakathi ekilasini lokuqala nelesibili. A ukubhuka isihlalo liyadingeka ngaphezu kukajantshi ukudlula esihamba ku ngesivinini izitimela. Nale pass, nawe ukuthola izaphulelo kuma amabhasi ahlukahlukene, izikebhe, cruises, amahhotela, iminyuziyamu, kanye nezinye ezikhangayo.
I Eurail Global Pass engcono uma futhi uhlela zokuhambela amazwe angomakhelwane. Lokhu kudlula multi-izwe inikeza travel okungenamkhawulo 31 emazweni ahlukahlukene eYurophu (kufaka France). Nge Eurail ayishiyile, kukhona awapheli inani lezikhathi ungakwazi ukubamba isitimela. Khetha noma 3, 5, noma 7 izinsuku zokuhamba enyangeni eyodwa noma 10-15 izinsuku zokuhamba phakathi kwezinyanga ezimbili. Khumbula ukwenza ukubhuka ngaphambi kokuhamba.
Iningi maqembu wesitimela kuthiwa iphepha-based, futhi uzodinga ukubhala usuku sokuhamba yakho ngaphambi uhambo lokuqala kosuku ngalunye. Isihlalo ukubhuka ngesivinini izitimela kuyokulahlekisela phakathi € 10 futhi € 20 isihlalo ngasinye, ngenkathi travel ukubhuka ngamazwe isukela € 35 kuya € 89 isihlalo ngasinye (ngokuya ngendawo okuyiwa kuyo).
AN ISAZISO ESIBALULEKILE: Rail Pass Inani kuphela enhle yemali uma ukuqeqesha zokuhambela ezingaphezu kuka 14 izinsuku uma uhamba ngaphansi kwephoyinti lokukhomba amathikithi esitimela afana nalokho okushiwo yi-Save A Train okunikezwayo okungcono kunemali yakho.
Ama-marseilles kuya ezikhathini zaseLyon Isitimela
EParis kuya ezikhathini zaseLyon
Indlela Yokusebenzisa zemininingwane Amathikithi EFrance?
Ezitimeleni lesifunda kanye lendawo, kungase kudingeke ukuthi ahambe ithikithi ngokomzimba. Iya ebhokisini ukuqinisekiswa ngaphambi kokuhamba yakho ukuqinisekisa noma "isitembu" ithikithi lakho. Uma ungazange siwuqinisekise ngaphambi kokuhamba, ulinde umqhubi ukuba abuqede ngenkathi esitimeleni. Azikho ukubhuka isihlalo izitimela lesifunda kanye lendawo, ngakho nje ahlale kuphi.
On ngesivinini izitimela, kukhona isikhathi esithile libhalwe ithikithi lakho, kanye ithikithi kuvumeleke kuphela ukuthi ngesikhathi esithile. Asikho isidingo ukuqinisekisa amathikithi yakho ngoba une ukubhuka isihlalo. Qiniseka ukuthi uthola imoto kwesokudla futhi isihlalo (izinombolo ebhaliwe noma eprintiwe ku ithikithi lakho).
Ukuthola Babalelwa ku France Kusukela Paris
Lapho izivakashi ukuza France, iningi labo lenza iParis indawo yabo yokuqala ohambweni lwezitimela ngaphakathi ezweni. Lapho uqala e-Paris, ungakwazi ukufinyelela cishe yimuphi ukuphela ngaphakathi ezweni. Lezi ezinye izindawo eziyinhloko akhonza khona kusukela zezitimela waseParis labangela ukuqala komkhakha.
Gare d'Austerlitz noma Austerlitz Isiteshi Sesitimela – Bordeaux, Limoges, yasePoitiers, Toulouse, Biarritz, Tours, nezisentshonalanga Spain.
Montparnase Isiteshi Sesitimela noma Gare Montparnasse – Zonke TGVs entshonalanga France (Rennes, Nantes, Brest, Brittany)
Gare du Nord – Northeast France, Valenciennes, ezincane, Calais; Brussels, Cologne, futhi Amsterdam (Thalys); London (Eurostar).
Gare de Lyon – Eningizimu yeFrance. Montpellier, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Besancon, Marseille, nice. Mulhouse eMpumalanga France. Catalonia (Girona, Barcelona), Italy, naseSwitzerland (Geneva, Zurich).
Saint Lazare Isiteshi sesitimela noma Gare St. Lazare – Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg.
East Station – Nancy. Reims, Metz, Strasbourg, Luxembourg, futhi eJalimane.
Kuhle Tips For Izikhangibavakashi EFrance ngu zemininingwane
Thina ukukunikeza uhlu amathiphu omkhulu ezokwenza isitimela sakho travel eFrance esikahle futhi kujabulise.
Fika ekuseni esiteshini sesitimela. Qinisekisa ukuba esiteshini sesitimela okungenani 20 imizuzu ngaphambi kokuhamba, noma ngisho nangaphambi kwalokho uma ojikelezayo kusukela zezitimela omkhulu, ezifana Gare du Nord Paris. Ukuze izivakashi ongalukhulumi French, akukho okubi kakhulu ukwedlula ukufika imizuzu embalwa nje ngaphambi kokuhamba ngaphandle kokuba nakancane lapho ukuya. Fika kusenesikhathi kuyokunika isikhathi ukuhlola IBhodi Ukuhamba ukuze uthole ulwazi esiteshini, ukukhomba ukuthi iyiphi platform isitimela sakho kokushiya, bese uthola ipulatifomu efanele.
Ungalokothi ushiye imithwalo yakho zingagadiwe. Ungafuna ukuhamba esitolo esiseduze kwabanye Ungadla noma amanzi. Uma unquma ukuhamba, ungashiyi esikhwameni sakho ngisho zingagadiwe yesibili. kungenjalo, wena aba sengozini yokuba imithwalo yakho zebiwe amasela abanolwazi. zezitimela Major eFrance (Kubandakanya Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon, futhi Ingabe Paris Austerlitz esiteshini) babe kwesokunxele umthwalo ikhabethe lobehlukene. Ngaphambi kokungena indawo eyakhiwayo, ulindele ukuba izikhwama zakho X-rayed. Uma ugibelile, beka umthwalo wakho ngaphakathi ukungaboni yakho esikhundleni sesiphambano esingokwesiko ozinikele umthwalo izikhala.
Pakisha ukudla. Abagibeli avunyelwe bafike nokudla kwabo kanye isiphuzo ezitimeleni, okuyinto kakhulu elide isitimela ugibele. Ezinye izitimela abe cafe ebhodini, futhi iningi labo inqola Sibona ukuthi kusondela. Ngeshwa, the inqola akezi njalo, futhi kungenzeka cafe ivaliwe. Ukudla neziphuzo ebhodini futhi ezibizayo. ukuze eqela ngaphezulu, ukupakisha ngokwakho ube epikinikini nalesi ukudla okuthandayo njalo ngaphambi kokuba ahambe uhambo. Kukhona lula ezitolo ezahlukene iziteshi kakhulu isitimela lapho ungakwazi ukuthenga ukudla neziphuzo.
Thwebula a ujantshi Planner uhlelo lokusebenza efonini yakho. Kukhona uhla wesitimela Planner zokusebenza ungafaka futhi usebenzise ukwenza isitimela yakho ihamba kuwusizo kakhudlwana. Isihloko sethu iqukethe wonke ulwazi kanye isitimela izimiso izitimela European, nezinye izinhlelo zokusebenza angadingi uxhumano lwe-inthanethi. Nge lokusebenza wesitimela Planner, uyohlale wazi ukuthi isitimela sakho kuzoba ngasekupheleni (futhi isikhathi eside kangakanani) noma ngesikhathi, kanye lapho platform ke izofika / ehlukana. Ngo emadolobheni amakhulu efana Paris, akekho noyedwa “main” esiteshini, futhi kulula ukudida eyodwa esiteshini ukuze uthole enye i. Ngohlelo lokusebenza kwesokudla, uzobe isiqiniseko sokuthi uthola off esiteshini lesifanele.
Impahla. Uma kuziwa umthwalo, ungaletha kakhulu ngendlela nikwazi ukuthwala kusukela azikho imingcele isisindo. Ungakwazi ukugcina izikhwama zakho phezulu, ngemuva isihlalo sakho, noma imithwalo adala emotweni yakho.
Okokuqala nesigaba amathikithi lesibili ekilasini. Akukho mehluko omkhulu phakathi kwezimoto ezisezingeni lokuqala nezesigaba sesibili. Nokho, ke akakhulumi yokuqala ekilasini, nezihlalo kukhona kancane ezinkulu. izimoto Okwesibili kwekilasi nazo ngokuphelele ukhululekile. Kuyafaneleka ukusho ukuthi amathikithi esigaba sokuqala abiza cishe u-1.5x ngaphezulu kwemali yokugibela yesigaba sesibili.
Awukwazi ukubuyisela imali amathikithi ezishibhile. Mhlawumbe okuwukuphela kwethonya elibi kumathikithi ashibhile ukuthi awanakushintshwa noma abuyiselwe imali.
imishini self-service. Uma usebenzisa ithikithi umshini sokuzicabangela, ungakhetha inketho ngolimi lwesiNgisi, ngakho asikho isidingo ukuba ukukhathazeka uma ungenawo ukukhuluma isiFulentshi.
Ukuthwala ibhayisikili. Ezitimeleni endawo nawesifunda, ungathatha ibhayisikili nawe mahhala. TGVs futhi phakathi kwamadolobha Ebusuku (izitimela ngobusuku obubodwa) kwi imizila embalwa ukuvumela ukuthi uthathe ibhayisikili for imali encane (ngokuvamile mayelana € 10). On nezinye izitimela TGV, kuzodingeka ukuba afake ibhayisikili lakho esikhwameni-zip-up ibhayisikili.
Ukwenza uxhumano. Kanye uhambo, uhambo lwakho lingase lifune ukuthi ukushintsha izitimela. izitimela Ukushintsha ama ngokuvamile kuyashesha futhi kulula, ngakho asikho isidingo ukuba ukukhathazeka uma ungenayo isikhathi esanele phakathi izitimela. Uxhumano isitimela okungase kuhilele ukuhamba phesheya yesikhulumi noma enye ingxenye esiteshini sesitimela.
Yazi amagama sesitimela. emadolobheni amakhulu abe zezitimela amaningi, okuyinto kungadala ukudideka. Uma ungeke ukwazi amagama abo ngekhanda, uwabhala phansi ku ephepheni, abasindise efonini yakho, noma usebenzise uhlelo lokusebenza wesitimela Planner.
Mind iziteleka isitimela. ngoba iziteleka isitimela France waziwa, futhi ngaso sonke isikhathi baxwayise umphakathi ngaphambi kokudlulela kwelinye. Nakuba ezinye izitimela isazoqhubeka ukusebenzisa, iziteleka okuthile unaka uma ufuna ukugwema noma yikuphi ukuphazamiseka okukhulu.
Sebenzisa Chip & I-PIN ye-credit card. Ukuze uthenge ithikithi ku ezenzakalelayo ithikithi esitodlwaneni, uzodinga Chip & I-PIN ye-credit card, ngakho qiniseka ukuthi wazi i-PIN khodi yakho, nakuba singazi batusa ke, ngoba kuyabiza kakhulu.
Zonke emadolobheni amakhulu eFrance axhunyiwe ngu TGV – i-high-speed isitimela inethiwekhi izitimela ukuthi travel ngesivivini esingaba 200 mph. Kulezi ngesivinini, zonke izindawo zaseFrance ongazifinyelela.
Sidale lo mhlahlandlela “Complete Guide To Ichibi EFrance ngu zemininingwane” ukukunika ukuqonda enamandla kanjani wesitimela uhlelo French isebenza futhi ingakusiza uma ecabanga isitimela kodwa ungaqiniseki ukuthi yini ukwenza noma kuphi ukuqala. Noma ngabe adventure ojosaka, ngezebhizinisi, noma ngeholide umndeni, siye got nawe embozwe, Londoloza Isitimela iyona beka yokuthenga amathikithi esitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Complete Guide To Ichibi EFrance ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#I-sncf tgv TrainStation amathikithi esitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi nbangibhabhi travelfrance